Black Magic: Mini Motor Racing v1.7.2 For Android (204.05 MB)
Mini Motor Racing v1.7.2 For Android (204.05 MB)
Posted by Black Magic | Posted in Android Games | Posted on 7:18 AM
ကားမောင်း ဂိမ်းဝါသနာပါသူများ အတွက် Mini Motor Racing ဆိုတဲ့ ဂိမ်း တစ်ခု တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ Android 2.3.3 အထက်မှာဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပြေဆော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်..၊
APK + Data နှစ်ခုပေါင်း 204 MB ရှိပါတယ်..၊လိုချင်ရင်တော့ သည်းခံပြီး ဒေါင်းဗျာ..၊
Zippyshare ကတင်ထားတာဆိုတော့..၊ ကျွန်တော်လည်း ထပ်တင်မပေးနိုင်သေးဘူး..၊ လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ ပြောဗျာ..၊ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်..၊
via WiFi! Race in campaign competitions for big rewards! Upgrade your skills and cars to
win more! It’s all here in Mini Motor Racing.